နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးကို လက်ခံတွေ့ဆုံ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးကို လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးကို လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး H.E.Mr. Song Tao ကို နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ နေအိမ်မှာ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို တွေ့ဆုံရာမှာ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အတူ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းတို့ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးနဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာဟုန်လျန်လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးဝနျကွီးကို လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးဝနျကွီး H.E.Mr. Song Tao ကို နိုဝငျဘာလ ၆ ရကျနကေ့ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျရဲ့ နအေိမျမှာ လကျခံတှဆေုံ့ခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီလို တှဆေုံ့ရာမှာ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနဲ့ အတူ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး ဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာဇျောမွငျ့မောငျနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးကျောမရှငျဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာတငျမြိုးဝငျးတို့ တကျရောကျကွပွီး တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးဝနျကွီးနဲ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီး မစ်စတာဟုနျလနျြလညျး တကျရောကျခဲ့ပါတယျ။
Previous articleကမ္ဘာ့ဘိလိယက်နဲ့ စနူကာ ချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး ကျင်းပမယ်
Next articleဘိုရင်း ၇၃၇ လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့အကြောင်းကို စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား အာဏာပိုင်တွေ ဆို